Global Voices teny Malagasy » Ny foko Albaney no tompon’ny fanapahan-kevitra amin’ny fifidianana filoham-pirenena ao Makedonia Avaratra · Global Voices teny Malagasy » Print
- Global Voices teny Malagasy - https://mg.globalvoices.org -
Ny foko Albaney no tompon'ny fanapahan-kevitra amin'ny fifidianana filoham-pirenena ao Makedonia Avaratra
Voadika ny 07 Mey 2019 5:45 GMT 1	 · Mpanoratra Metamorphosis Foundation Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Makedonia, Fifidianana, Mediam-bahoaka, Politika
Mpifidy roa eo anoloan'ny birao fandatsaha-bato ao Makedonia Avaratra. Sary nalain'ny Meta.mk News Agency/Borche Popovski, CC BY.
Ity tantara ity dia niseho voalohany tao amin'ny Meta.mk News Agency , tetikasan'ny Metamorphosis Foundation. Navoaka etsy ambany ny dika nasiam-panitsiana izay tafiditra ao anatin'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Hifidy amin'ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny Alahady 5 May, ao anatin'ny fisalasalana momba ny taham-pandraisana anjara sy ny vokatra ny mponin'i Makedonia Avaratra.
Ity no fifidianana filoham-pirenena voalohany hatramin'ny tsy nahazoan'ny elatra havanana VMRO-DPNME ny maro an'isa tao amin'ny parlemanta tamin'ny taona 2016 rehefa avy nitondra nandritra ny 12 taona, ary ho fitsapana lehibe voalohany amin'ny fanohanana ara-politika ho an'ny governemanta iaraha-mitantanana tarihan'ny Antoko Demokraty Sosialy mpomba ny Andrefana (SDSM) ).
Ny kandidà Sosialy Demokraty, Stevo Pendarovski, no nitarika tamin'ny fihodinana voalohany tamin'ny 42,81 isan-jaton'ny fitambaran'ny vato : ny mpifaninana aminy , Gordana Siljanovska Davkova avy ao amin'ny VMRO-DPMNE kosa nahazo 42.25 isan-jato, izany hoe elanelanam-bato 4 486 fotsiny.
Io no elanelam-bato kely indrindra  teo amin'ireo kandidà roa izay tafiditra fihodinana faharoa tamin'ireo fifidianana filoham-pirenena dimy tany Makedonia Avaratra.
Loharanon'ny fiahiahiana hafa ny hoe hahatratra ny ampahan'isa kely indrindra mba hampanan-kery ny vokatra ve ny fihodinana faharoa. Milaza ny lalàna Makedoniana fa farafahakeliny 40% -n'ireo mpifidy 1.8 tapitrisa no takiana hifidy mba hampanan-kery ny voka-pifidianana. Nahitana fandraisana anjara 41,67 isan-jato ny fihodinana voalohany, izay natao tamin'ny 21 Aprily, somary ambony kelin'ny isan-jato tratrarina.
Nahavita ny fihodinana voalohany tamin'ny 10,6 isan-jaton'ny vato ny kandidà fahatelo, Blerim Reka, izay foko Albaney. Mandrafitra ny ampahefatry ny mponina eo ho eo any Makedonia Avaratra ny vondrom-piarahamonina foko Albaney ary mazava tsara fa avy amin'ny olom-pirenena mitovy foko aminy ny ankamaroan'ny vato azony.
Tabilaon'ny kandida ho filoham-pirenena foko Albaney Blerim Reka ao afovoan-tanànan'i Skopje, Makedonia avaratra. Saripikan'ny Global Voices, CC-BY.Billboard of the ethnic Albanian presidential candidate Blerim Reka in the center of Skopje, North Macedonia. Photo by Global Voices, CC-BY.
Azo heverina fa ireo mpifidy ao Reka no hanapa-kevitra amin'ny vokatra farany. Manaiky ireo mpanao fanadihadiana maro fa mety ho azon'i Pendarovski ireo vato ireo, satria mifototra indrindra amin'ny fampiroboroboana ny nasionalisman'ny foko Makedoniana ny antoko VMRO-DPMNE.
Furkan Saliu, mpanao gazety ao an-toerana, nibitsika tamin'ny teny albaney sy makedônianina mikasika ny zava-misy fa ao anatin'ny fanentanan'i Siljanovska ilay mpanao heloka bevava an'ady efa voaheloka, Johan Tarchulovski, solombavambahoaka VMRO-DPMNE .
Nuk shkon me të përkrah edhe shqiptarët edhe kriminel i dënuar për krime lufte ndaj shqiptarëve
Некако не иде да те подржи криминалец осуден за воени злосторства против Албанците, и да бараш гласови од Албанците pic.twitter.com/TpXdCFS6iZ 
— FurKlan (@FurkanSaliu) April 28, 2019 
Na izany aza, toa tsy mety izany hoe tohanan'ilay efa voaheloka tamin'ny heloka bevava an'ady tamin'ny Albaney, ary mangataka amin'ny Albaney mba hifidy anao.
Hafatra ho an'ny governemanta
Manampy ny vaton'i Siljanovska sy i Reka, miaraka amin'ireo vato tsy manan-kery, olona 432.000 no tsy nifidy ny governemanta Antoko sosialy Demokratika ankehitriny.
Nilaza ny praiminisitra Zoran Zaev fa takatry ny antoko ny hafatry ny vahoaka. Nilaza i Zaev fa midika ny valim-pifidianana fa tsy faly amin'ny tsy fahombiazan'ny governemantany ny olona ary nanambara ny “fanadiovana” ireo manampahefana mpanao kolikoly na tsy mahavita azy.
Stevo Pendarovski sy Gordana Siljanovska Davkova hifaninana amin'ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena ao avaratr'i Makedonia, ny 5 May. Sary avy amin'i sampam-baovao Meta.mk, CC BY.
Tamin'ny fanehoana fanohanana, nanome kifafa ho toy ny fanomezana  ho an'i Zaev nandritra ny famoriam-bahoaka ilay mpilalao sarimihetsika Dragan Spasov, fantatra amin'ny hoe Dac. Tamin'ny volana Janoary 2018, nametra-pialana tsy ho tale vonjimaika  ao amin'ny Teatra Nasionaly i Dac rehefa nahatonga lozam-piarakodia izay naha-voadoana tovovavy iray, saingy tsy naratra mafy. Nilaza izy nanomboka teo fa tokony arahin'ireo manampahefana rehetra ny ohatra asehony amin'ny andraikitra ara-politika.
Ny fiheveran'ny governemanta dia hoe nisy ny fahadisoam-panantenana tamin'ny tantara ratsy vao haingana momba ny kiantranoantrano rehefa nanendry ireo havana tamin'ny asa ao amin'ireo orinasam-panjakana ireo mpikambana ao amin'ny parlemanta sy ny minisitra. Tamin'ny 25 aprily, nandidy  ireo havana toy izany i Zaev mba hametra-pialàna amin'ny toerana misy azy ireo.
Etsy ankilany, manana ny heviny hafa ireo manampahefana ao amin'ny mpanohitra VMRO-DPMNE. Nilaza  ireo manampahefany fa hiteraka tsy fahafalian'ny vahoaka ihany koa ny voka-pifidianana noho ny Fifanarahana Prespa, izay nanova ny anaran'ny firenena ho Makedonia Avaratra ary namarana ny fifanolanana naharitra 27 taona tamin'i Gresy, izay toherin'ny VMRO-DPMNE mafy.
Nahatonga ireo mpanao sonia, ny Praiminisitra Makedoniana Zaev sy ny namany Grika, Alexis Tsipiras ho voatendry tamin'ny Loka Nobel ho an'ny Fandriampahalemana ny fifanarahana. Nilaza  matetika i Siljanovska fa tokony handresy izy, tsy hampiasa ny anarana hoe Makedonia Avaratra ny governemantany.
Ho setrin'izany, nilaza i Pendarovski fa ny vato ho an'ny VMRO-DPMNE dia vato hamerina ny fitondran'ny praiminisitra teo aloha Nikola Gruevski, voaheloka higadra roa taona an-tranomaizina noho izy voampanga tamin'ny kolikoly tamin'ny taona 2018, ary mialokaloka any Hongria ankehitriny.
Na izany aza, tsy maintsy tratrarina aloha ny taham-pandraisana anjara ambany indrindra 40 isan-jato. Raha tsy izany dia tsy maintsy hanomboka amin'ny voalohany indray ny fifidianana ary mety hanaraka ny krizy ara-politika vaovao.
Article printed from Global Voices teny Malagasy: https://mg.globalvoices.org
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/05/07/138272/
 nitarika tamin'ny fihodinana voalohany tamin'ny 42,81 isan-jaton'ny fitambaran'ny vato: https://rezultati.sec.mk/mk-MK/1/r
 kely indrindra: https://meta.mk/en/the-first-round-with-the-narrowest-difference-in-the-last-5-elections-infographic/
 Manaiky ireo mpanao fanadihadiana maro : https://civilmedia.mk/albantsite-pokazhaa-deka-znaat-da-izberat-i-pak-ke-izberat-matematichki-pretsizno/
 April 28, 2019: https://twitter.com/FurkanSaliu/status/1122441243651399681?ref_src=twsrc%5Etfw
 Nilaza : https://tera.mk/%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%98%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D1%87/
 nanome kifafa ho toy ny fanomezana: https://tocka.com.mk/vesti/305351/na-zaev-mu-dadoa-metla-steta-sto-ne-znae-da-leta-tviter-zaednicata-so-reakcii-posle-sinokesniot-poteg-na-dac
 nilaza : https://www.24.mk/details/pendarovski-glas-za-siljanovska-e-glas-za-gruevski
 mialokaloka any Hongria : https://globalvoices.org/2018/11/16/from-prime-minister-to-escaped-convict-macedonias-ex-leader-nikola-gruevski-flees-to-hungary/
Creative Commons Attribution 3.0 - Zo Sasantsasany Voatokana: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/